Augmented Reality နဲ့ Virtual Reality ဘာကွာသလဲဆိုရင်?? – DigitalTimes.com.mm
Virtual Reality (VR) တို့ Augmented Reality(AR) တို့ဆိုတာ စမတ်ဖုန်းတွေလောက်တော့ သိပ်မတွင်ကျယ်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အချိန်တစ်ခုကိုရောက်လာရင်တော့ ဒီနည်းပညာတွေက နေ့စဉ်တွေ့မြင်နေရသမျှ အမြင်အာရုံတွေကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲပစ်မလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါပြီ။ အခုဆို app တော်တော်များများ၊ hardware ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေတော်တော်များများမှာ augmented reality က လူတွေနဲ့ကျွမ်းဝင်လာနေပြီဖြစ်လို့ VR ထက်နှာတစ်ဖျားသာတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။ ဘယ်သူ သာတယ်မသာတယ်ဆိုတာထက် ဒီ နည်းပညာ၂ခုကို သိပ်မကွဲသေးရင် သေချာပြန်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
Virtual Reality ဆိုတာဘာလဲ??
VR နဲ့သာဆို ဆော့ဖ်ဝဲလ်နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အတုအယောင်ထဲကို ကိုယ်တိုင်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီး ဧဝရတ်တောင်ပေါ်တက်ချင်တယ်ဆိုလည်း ရမှာပါပဲ။ အတုအယောင်ဖန်တီးထားတဲ့ကမ္ဘာထဲကိုရောက်သွားပြီး အကောင်တွေနဲ့တိုက်မလား မိုးပေါ်ပျံမလား မိုးပျံရထားစီးကြည့်မလား ကိုယ်ကြိုက်တာလုပ်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် အဲဒီကမ္ဘာထဲမှာရောက်သွားသလိုမျိုး ကိုယ်ရဲ့အပြုအမူတွေနဲ့ အပြန်အလှန် interact လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
VR မှာလိုအပ်တာတွေကတော့ အသံနဲ့မြင်ကွင်းပါပဲ။ မြင်ကွင်းကနေတစ်ဆင့် ဖန်တီးထားတဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုထဲထိဆွဲခေါ်သွားပြီး VR headset ထဲမှာ ဒါမှမဟုတ် သူနဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့ sensor တွေကိုသုံးပြီးတော့ interact လုပ်နိုင်မှာပါ။ VR နဲ့သာဆို လေယာဉ်ပိုင်းလော့တွေကို virtual လေယာဉ်တစ်ခုပေါ်ပို့လိုက်ပြီး နေရာအစစ်တစ်ခုဆီမောင်းနေရသလိုမျိုး ဖန်တီးထားပြီး ပိုင်းလော့ရဲ့လိုအပ်တဲ့စွမ်းရည်ကို စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာသုံးသလိုမျိုး တကယ်စစ်မဖြစ်ပေမယ့်လည်း VR နဲ့စစ်ပွဲအတွေ့အကြုံရအောင် စစ်သားတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးသလိုမျိုး ဒီလိုမျိုးတွေမှာ အသုံးတည့်တဲ့ နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Augmented Reality ဆိုတာဘာလဲ??
AR ကတော့ VR နည်းပညာကို တကယ့်လက်တွေ့ကမ္ဘာမှာအသုံးချရတာဆိုတော့ နည်းနည်းပိုရှုပ်ထွေးသွားပါပြီ။ တကယ့်ကမ္ဘာမှာ ကွန်ပျူတာ ဂရပ်ဖစ်တွေ ဒီဂျစ်တယ်အချက်အလက်တွေ ပြပေးတဲ့သဘောမျိုးပါပဲ။ AR မှာကျတော့ VR လို သီးခြားကမ္ဘာတစ်ခုဆီရောက်သွားပြီး တိုက်တာခိုက်တာမျိုးတွေမဟုတ်တော့ဘဲ virtual အရာဝတ္ထုတွေကို လက်တွေ့ဘဝဆီခေါ်လာတဲ့သဘောမျိုးပြောရမှာပါ။
ဥပမာ အဝတ်လဲခန်းကိုဝင်ပြီး တစ်ထည်ပြီးတစ်ထည် လိုက်မလိုက်ဝတ်ကြည့်နေရမယ့်အစား AR နဲ့ အဝတ်အစားတွေတွဲဖက်ကြည့်လိုက် ပြီးမှအလိုက်ဖက်ဆုံးတစ်စုံကိုရွေးလိုက်တာက ပိုပြီးအချိန်ကုန်သက်သာစေမှာပါ။ ပြင်ပကမ္ဘာမှာမတွေ့ရတဲ့ အကောင်ပလောင်တွေ အရာဝတ္ထုတွေကို AR နဲ့ဒီလောကထဲခေါ်လာလို့ရနိုင်တော့ အပျင်းပြေတာပေါ့။ အိမ်ထဲကို ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေထားတဲ့အခါမှာလည်း တစ်ခုချင်းစီရွှေ့ကြည့် ပြန်ပြောင်းလုပ်နေမယ့်အစား AR app နဲ့ နေရာချကြည့် အဆင်ပြေဆုံးပုံစံကိုရမှ ရွှေ့ပြောင်း ဒါဆိုအချိန်ကုန်သက်သာသွားပါပြီ။ ခုနောက်ပိုင်းဆို AR နဲ့တင် ပစ္စည်းတွေဆင်ကြည့်ပြီး တစ်ခါတည်းဝယ်လို့ရနိုင်အောင် ဈေးဝယ် shopping app မှာပါ AR ကိုသုံးလာကြတာ တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။
ဘယ်နည်းပညာက ပိုအသုံးဝင်သလဲဆိုတာကျတော့ သူ့နေရာနဲ့သူ အသုံးဝင်နေတာပါပဲ။ ခြုံပြောရရင်တော့ VR ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုအတုအယောင်ဖန်တီးထားတဲ့ကမ္ဘာထဲကို ဆွဲခေါ်သွားပြီး interact လုပ်ခိုင်းတာပါပဲ။ AR ကတော့ လက်ရှိကိုယ်ရှိနေတဲ့ကမ္ဘာမှာ အတုအယောင်ပစ္စည်းတွေကိုဆွဲခေါ်လာပြီး မျက်စိရှေ့တင်မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ရစေမယ့် နည်းပညာပါပဲ (eg- Pokemon Go) ။ ဒီလောက်အတိုချုပ်ဆိုရင်တော့ အားလုံးကောင်းကောင်းနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ နောင်မှာလည်း trending ဖြစ်နေတဲ့ နည်းပညာတွေကို မိတ်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် 🙂
Ref: MakeTechEasier, Quora, AndroidAuthority
Virtual Reality (VR) တို့ Augmented Reality(AR) တို့ဆိုတာ စမတျဖုနျးတှလေောကျတော့ သိပျမတှငျကယျြသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အခြိနျတဈခုကိုရောကျလာရငျတော့ ဒီနညျးပညာတှကေ နစေ့ဉျတှမွေ့ငျနရေသမြှ အမွငျအာရုံတှကေို ဘယျလိုပွောငျးလဲပဈမလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာကောငျးလာပါပွီ။ အခုဆို app တျောတျောမြားမြား၊ hardware ပစ်စညျးတှနေဲ့ ဗီဒီယိုဂိမျးတှတေျောတျောမြားမြားမှာ augmented reality က လူတှနေဲ့ကြှမျးဝငျလာနပွေီဖွဈလို့ VR ထကျနှာတဈဖြားသာတဲ့အနအေထားမှာရှိနပေါတယျ။ ဘယျသူ သာတယျမသာတယျဆိုတာထကျ ဒီ နညျးပညာ၂ခုကို သိပျမကှဲသေးရငျ သခြောပွနျရှငျးပွခငျြပါတယျ။
VR နဲ့သာဆို ဆော့ဖျဝဲလျနဲ့ဖနျတီးထားတဲ့ ပတျဝနျးကငျြအတုအယောငျထဲကို ကိုယျတိုငျရောကျသှားမှာဖွဈပွီး ဧဝရတျတောငျပျေါတကျခငျြတယျဆိုလညျး ရမှာပါပဲ။ အတုအယောငျဖနျတီးထားတဲ့ကမ်ဘာထဲကိုရောကျသှားပွီး အကောငျတှနေဲ့တိုကျမလား မိုးပျေါပြံမလား မိုးပြံရထားစီးကွညျ့မလား ကိုယျကွိုကျတာလုပျလို့ရပါတယျ။ ကိုယျတိုငျ အဲဒီကမ်ဘာထဲမှာရောကျသှားသလိုမြိုး ကိုယျရဲ့အပွုအမူတှနေဲ့ အပွနျအလှနျ interact လုပျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
VR မှာလိုအပျတာတှကေတော့ အသံနဲ့မွငျကှငျးပါပဲ။ မွငျကှငျးကနတေဈဆငျ့ ဖနျတီးထားတဲ့ကမ်ဘာတဈခုထဲထိဆှဲချေါသှားပွီး VR headset ထဲမှာ ဒါမှမဟုတျ သူနဲ့တှဲဖကျထားတဲ့ sensor တှကေိုသုံးပွီးတော့ interact လုပျနိုငျမှာပါ။ VR နဲ့သာဆို လယောဉျပိုငျးလော့တှကေို virtual လယောဉျတဈခုပျေါပို့လိုကျပွီး နရောအစဈတဈခုဆီမောငျးနရေသလိုမြိုး ဖနျတီးထားပွီး ပိုငျးလော့ရဲ့လိုအပျတဲ့စှမျးရညျကို စဈဆေးတဲ့အခါမှာသုံးသလိုမြိုး တကယျစဈမဖွဈပမေယျ့လညျး VR နဲ့စဈပှဲအတှအေ့ကွုံရအောငျ စဈသားတှကေိုလကေ့ငျြ့ပေးသလိုမြိုး ဒီလိုမြိုးတှမှော အသုံးတညျ့တဲ့ နညျးပညာတဈခုဖွဈပါတယျ။
AR ကတော့ VR နညျးပညာကို တကယျ့လကျတှကေ့မ်ဘာမှာအသုံးခရြတာဆိုတော့ နညျးနညျးပိုရှုပျထှေးသှားပါပွီ။ တကယျ့ကမ်ဘာမှာ ကှနျပြူတာ ဂရပျဖဈတှေ ဒီဂဈြတယျအခကျြအလကျတှေ ပွပေးတဲ့သဘောမြိုးပါပဲ။ AR မှာကတြော့ VR လို သီးခွားကမ်ဘာတဈခုဆီရောကျသှားပွီး တိုကျတာခိုကျတာမြိုးတှမေဟုတျတော့ဘဲ virtual အရာဝတ်ထုတှကေို လကျတှဘေ့ဝဆီချေါလာတဲ့သဘောမြိုးပွောရမှာပါ။
ဥပမာ အဝတျလဲခနျးကိုဝငျပွီး တဈထညျပွီးတဈထညျ လိုကျမလိုကျဝတျကွညျ့နရေမယျ့အစား AR နဲ့ အဝတျအစားတှတှေဲဖကျကွညျ့လိုကျ ပွီးမှအလိုကျဖကျဆုံးတဈစုံကိုရှေးလိုကျတာက ပိုပွီးအခြိနျကုနျသကျသာစမှောပါ။ ပွငျပကမ်ဘာမှာမတှရေ့တဲ့ အကောငျပလောငျတှေ အရာဝတ်ထုတှကေို AR နဲ့ဒီလောကထဲချေါလာလို့ရနိုငျတော့ အပငျြးပွတောပေါ့။ အိမျထဲကို ပရိဘောဂပစ်စညျးတှထေားတဲ့အခါမှာလညျး တဈခုခငျြးစီရှကွေ့ညျ့ ပွနျပွောငျးလုပျနမေယျ့အစား AR app နဲ့ နရောခကြွညျ့ အဆငျပွဆေုံးပုံစံကိုရမှ ရှပွေ့ောငျး ဒါဆိုအခြိနျကုနျသကျသာသှားပါပွီ။ ခုနောကျပိုငျးဆို AR နဲ့တငျ ပစ်စညျးတှဆေငျကွညျ့ပွီး တဈခါတညျးဝယျလို့ရနိုငျအောငျ ဈေးဝယျ shopping app မှာပါ AR ကိုသုံးလာကွတာ တျောတျောအဆငျပွပေါတယျ။
ဘယျနညျးပညာက ပိုအသုံးဝငျသလဲဆိုတာကတြော့ သူ့နရောနဲ့သူ အသုံးဝငျနတောပါပဲ။ ခွုံပွောရရငျတော့ VR ဆိုတာ ကိုယျ့ကိုအတုအယောငျဖနျတီးထားတဲ့ကမ်ဘာထဲကို ဆှဲချေါသှားပွီး interact လုပျခိုငျးတာပါပဲ။ AR ကတော့ လကျရှိကိုယျရှိနတေဲ့ကမ်ဘာမှာ အတုအယောငျပစ်စညျးတှကေိုဆှဲချေါလာပွီး မကျြစိရှတေ့ငျမကျြဝါးထငျထငျတှမွေ့ငျရစမေယျ့ နညျးပညာပါပဲ (eg- Pokemon Go) ။ ဒီလောကျအတိုခြုပျဆိုရငျတော့ အားလုံးကောငျးကောငျးနားလညျလောကျပွီလို့ထငျပါတယျ။ နောငျမှာလညျး trending ဖွဈနတေဲ့ နညျးပညာတှကေို မိတျဆကျပေးဦးမှာဖွဈလို့ စောငျ့မြှျောဖတျရှုနိုငျပါတယျ 🙂
ဓါတ်ပုံဖြင့် လှည့်စားခံလိုက်ရတဲ့ OnePlus6ရဲ့ Face Unlock